युगसम्बाद साप्ताहिक - आचारसंहिता कार्यान्वयनको चुनौति
आचारसंहिता कार्यान्वयनको चुनौति
Monday, 09.19.2011, 02:52pm (GMT+5.5)
अर्ति उपदेश दिने स्वयं अनुशासित, मितव्ययी र इमान्दार हुनसक्यो भने मात्र त्यसले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बस्नेहरू स्वयं अनुशासनमा बस्नैपर्छ । यही मान्यता बोकेर सरकारले प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहुँदै शाखा अधिकृतसम्मलाई एउटै मापदण्डमा राख्ने गरी आचारसंहितामा बाँध्ने भएको छ । यो एउटा सुखद् सन्दर्भ हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले परिवर्तनको सुरुवात आफूबाटै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्नुभएको देखिएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै नेपालमै बनेको मोटर चढ्ने घोषणा गर्नुभो । त्यसपछि निवासमा भन्दा कार्यालयमा बढी समय दिन थाल्नुभयो । सिंहदरबार र बालुवाटार ओहोरदोहोर गर्ने समय बचत गर्ने उद्देश्यले सिंहदरबारकै क्याण्टिनमा बिहानको खाना खाने व्यवस्था गर्नुभयो । कार्यालय समयभन्दा अगावै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुग्न थाल्नुभयो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै सबै मन्त्रीहरूलाई नैतिक दवावमा राख्नुभयो । यतिले मात्र नपुगेर मन्त्रीहरूले गर्न हुने र नहुने नीति नै निर्माण गरी आचारसंहिता लागू गर्ने जमर्को गर्नुभयो । मन्त्रीहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप गर्न नपाउने र कुनै समस्या भए सरकारमा सामेल दलहरूको बैठकमा राख्नुपर्ने नियम बनाइयो ।
सरकारले सुरु गरेको यो कार्य आम जनताका लागि केही हुन्छ कि भन्ने आशाको एउटा जूनकिरी मात्र हो । नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने र गर्न खोज्नेलाई लखेट्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको पूरौ रोग भएकाले डा. भट्टराई नेतृत्व सरकारलाई सजिलै काम गर्न सक्ला भन्न सकिन्न तापनि नेतृत्व गर्ने व्यक्ति इमान्दार र स्वच्छ छविको भयो भने त्यस मातहत रहने अरु व्यक्तिहरू पनि इमान्दार बन्न करै लाग्छ भन्न अवश्य सकिन्छ । वर्तमान मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको परिवर्तित व्यवहारले यस्तो संकेत गरेको पनि छ । २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि लगातार मन्त्री बन्दै आएका र भ्रष्टाचारी भनेर आरोपित व्यक्तिहरू अहिले आएर इमान्दार, अनुशासित र भ्रष्टाचाररहित प्रशासनको वकालत गर्न थालेका छन् । उनीहरूको व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यो त आगामी दिनमा देखिने नै छ तर पनि नेपाली जनताले डा. बाबुराम भट्टराईबाट गरेको अपेक्षा भनेको भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन नै होे ।
शान्ति र संविधानका लागि एकलब्य बनेर लागिपर्ने घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीका लागि अहिलेको समय निकै चुनौतिपूर्ण छ । शान्ति र संविधानको एकसूत्रीय रटान सबैले लगाइरहेका छन् । स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, आर्थिक अनुशासनका कुरा सबैले गर्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न कोही पनि अग्रसर भएको आजसम्म भेटिएको छैन । यतिखेर सरकारले सुशासनका पक्षमा चालेको पाइला कति दह्रो हुने हो त्यो अग्निपरीक्षाकै घडीमा छ । राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएको अपराध नियन्त्रण ज्यादै चुनौतिपूर्ण छ । नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारले कस्तो नीति अीख्तयार गर्ने हो ? हेर्न बाँकी नै छ ।
राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरू नै शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने प्रमुख शक्ति रहेको नेपाल प्रहरीको एक प्रतिवेदनले नै देखाइसकेको छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा पनि यिनै शक्तिहरू संलग्न रहेको जगजाहेर छ । ठेक्का-पट्टादेखि सिण्डिकेट, कालोबजारी, गुण्डागर्दीलाई राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूले नै संरक्षण दिइरहेका छन । यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य कसरी थरिन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज र शुशासनका लागि प्रधानमन्त्री एक्लोको सदाचारी बन्ने प्रयासले कुनै सार्थक परिणाम दिंदैन । जसरी शान्ति र संविधानमा एकलब्य बन्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ त्यसरी नै मुलुकमा सुशासन कायम गरी शान्ति सुरक्षा वहाली गराउन पनि उहाँ प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । मुलुक चुनौति नै चुनौतिको पहाडले घेरिएको छ । विकृति, विसंगति तथा अस्थिरताले आम जनतामा घोर निराशा छाइरहेको छ । जनतालाई सहानुभूति दिने गरी सरकारले गरेको आचारसंहिताको घोषणा फगत घोषणा मात्र नभएर कार्यान्वयन पनि हुने हो भने यसले जनतामा आशा जगाउने मात्र नभै विश्वासको नयाँ वातावरण पनि सिर्जना गर्नेछ ।